🥇 ▷ Atlas Beta Mashruuca: EA wuxuu u oggolaanayaa tijaabinta madaddaalada madaddaalada muddo gaaban ✅
Atlas Beta Mashruuca: EA wuxuu u oggolaanayaa tijaabinta madaddaalada madaddaalada muddo gaaban
Waxaa la bilaabay Oktoobar 2018 by EA, adeegga adeegga khamaarka daruuriga ah ee Atlas ayaa lagu wadaa inuu maro tijaabada koowaad ee la dheereeyay labada toddobaad ee soo socda. Kaqeybgaleyaasha la xushay ee barnaamijka Ciyaarta ee Ciyaaraha Bulshada ee EA waa inay awoodaan inay marin u helaan deeqda oo ay bilaash isugu dayaan. Ma jiraan xayiraad gobol.
Afarta “cayaaraha HD” ee imtixaanka
Ugu yaraan, EA waxay wacdaa midna iyo tixraaca adeegsiga Amazon AWS, oo leh 69 goobood oo adduunka oo dhan ah 22 degmo, waxay soo jeedineysaa in adeegga loo duubay adduunka oo dhan imtixaanka. Iminka, marin u helitaanku wuxuu ku dhici karaa oo keliya barnaamij gaar ah oo aan lagu marin macmiilka asalka ah oo keliya oo keliya PC. Hirgelinta farsamada ayaa la tijaabiyaa, ee ma aha shey la soo afjaray.
Kuwa xiiseynaya inay ku doortaan EA mabda ‘aan la magacaabin waa inay isku dayaan ciyaaraha FIFA 19, Titanfall 2, Baahida Xawaaraha Xawaaraha iyo Unravel. EA waxay ka hadashaa “Ciyaaraha HD“. Tani waxay la macno tahay in waqtiga la joogo oo keliya xalka HD oo leh 1280 × 720 pixels la isticmaali karo ayaa weli la arki doonaa. Atlas waa inay sidoo kale bixisaa Ultra HD bilowga suuqa. Si kastaba ha noqotee, macluumaadkan iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan semi-finalka Wajiga beta ee dadweynaha ayaa loo badinayaa in lagu faafiyo oo keliya daabacaha laftiisa, sababta oo ah dhammaan macluumaadka ay ciyaartoydu helaan markay ka qayb gelayaan barnaamijka Ciyaaraha Bulshada ee EA waxay ku xiran tahay sirta – ilaa ay EA oggolaato daabiciddeeda. .
Ahmiyada la siinayaa waa inay kudhacdaa tijaabada iskutallaabinta sidaas darteedna awooda mideynta isticmaaleyaasha aaladaha kaladuwan sida PC, PlayStation ama Xbox. Horukaca ciyaarta ee wejiga imtixaanka waa in la istacmaaliyaa kadib marka beta laga helo kombuyutarka.
Ciyaaraha daruuraha ayaa soo socda – oo keliya goorma?
Ciyaaraha daruuruhu waa shay loo baahan yahay waqti uun EA. Mashruuca Atlas waxaa loola jeedaa inuu ka badan yahay madal lagu xisaabiyo cayaaraha caanka ah ee daruuraha. Iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyado la waafaqay sida matoorka Frostbite, AI iyo awoodaha warbaahinta bulshada Atlas ayaa sidoo kale ah qalab cusub oo loogu talagalay hirgelinta cayaaraha si cad oo daruur ah – EA ayaa ugu yeera “ciyaarta mustaqbalka-ciyaarta-daruuriga“Ilaa iyo markaa, wali waxay ahayd wado dheer, beta oo hadda lagu dhawaaqay, si kastaba ha noqotee, waa horumar kale oo muhiim ah.